विचार – Page3– Google pati
सांस्कृतिक रूपान्तरणको दृष्टिबाट हेर्दा अहिलेका राजनेता पनि देखियो । कथित दार्शनिक पनि देखियो । पढियो सुनियो । तर राजनेता, दार्शनिक अनि चुनावी अभ्याससहित विलक्षण प्रतिभा भएको व्यक्ति रुदाने (रूपचन्द्र दामन, नेपाल ) सँग सङ्गत र सहकार्य यो जीवनको गौरव गर्ने मुख्य कुरा ठानियोे । यो नै जीवन सार्थक भएको महसुस...बाँकी
तपाईंको सुताई कस्तो छ ? हेरेर थाहा पाउनुहोस व्यक्तित्व
धेरैजसो मनोवैज्ञानिकले अचेतन शरीरको भाषाले हाम्रो मानसिक अवस्था र सम्बन्ध बारे जानकारी दिने कुरामा विश्वास गर्छन् । तर सुत्ने बेला हाम्रो शरीरको स्थिती र अवस्थाबाट हामीले के साँच्चै जानकारी पाउन सक्छौं त ? हुन त हामी सधैं एकै तरिकाले सुत्छौं भन्ने हुँदैन । राती जसरी सुतेका छौं, त्यसरी नै उठ्छौं...बाँकी
माई फस्ट लभ
आवेश कुमार श्रेष्ठ पुसको महिना, सूर्यको साथ नै प्यारो लाग्ने सबैलाई । यही भएर स्कुलका सबै जना त्यो पारिलो सूर्यको तापमा बसेका थिए । त्यही माझ ऊ पनि थिई । कालो स्वेटर, सर्लक्क परेको कपाल, नशालु नयन र ओठमा मन्द मुस्कान बोकेर उभिएकी थिई । हजार जना होउन् या लाखौँ...बाँकी
दिन प्रतिदिन बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण अबको केही वर्षमा नै विश्व गम्भीर संकटमा पर्नसक्ने चेतावनी जानकारहरुले दिएका छन् । एक अस्ट्रेलियन थिङ्कट्याङ्क संस्थाले गरेको एक अध्ययन रिपोर्टले जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी नयाँ चेतावनी दिएको हो। यदि अहिलेदेखि नै सबै देशहरुले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुसारको काम नगर्ने हो भने अबको...बाँकी
प्रेम बर्जित देशमा…
म कामीसँग गएर त चोखिएँ । तैंले यो सार्कीलाई छोड्न सक्दिनस् ? पख तिमीहरूलाई माटोमुनि गए पनि छोड्दिनँ ।’ केटीलाई उसकी फुपूले पुलिस चौकीभित्रै धम्की दिई । केटीले सिन्दूर र पोते लगाएकी थिई । उसले पोते चुँडाई । सिन्दूर पुछिदिई । पुलिसले केही भनेन । केटीले जान मानेकी थिइन । जबर्जस्ती तानेर लगे । पर पुग्दासम्म केटी रोइरही । केही हुँदैन...बाँकी
हेटौंडाकी यी आमा जसले गणतन्त्र अघिका जनआन्दोलनहरुमा ४ छोरा गुमाईन
ओठ कलेंटी परेका छन् । अनुहार मुर्झाएको छ । हरपल रसाएका झैं देखिन्छन् आँखा । ‘बेपत्ताकी आमा’ भनेर चिनिने ७० वर्षीया सुभद्रामाया दर्नाल झुप्रे घरको छेउभित्तो समाउँदै साँघुरो कौसीमा निस्किइन् । होचो पिर्कामा बसेपछि आफ्नो ‘बेपत्ता’ परिचय सुनाउन थालिन् । गणतन्त्र प्राप्तिअघिका जनआन्दोलनहरूमा आफ्ना ४ छोरा बेपत्ता भएपछि एक्लिएकी सुभद्रामाया दर्नाल हेटौंडास्थित सुकुम्बासी टोलमा । उनका...बाँकी
नेपालको साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुका तीन कारण
केही साता अघि करिब दुई हजार सरकारी वेबसाइट ह्याक भएर चार घण्टा बन्द भएपछि नेपालको साइबर सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। सरकारी निकायहरूले वेबसाइटहरू राखिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा ह्याकरहरूको हमलाले साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था देखाएको विज्ञहरूको मत छ। सो घटना ठूलो रहेको र यसबाट पाठ नसिके भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा...बाँकी
काठमाडौं | अरूण बराल
जब पत्रकारकै कारण सरकारी मान्छेहरुले मनमौजी गर्न पाउँदैनन्, जब पत्रकारकै कारण दलालहरुले सार्वजनिक जग्गा मिच्न र खुलामञ्च बेचेर खान पाउँदैनन्, तब उनीहरुले पत्रकारमाथि कस्तो व्यवहार गर्लान् ? तिनले प्रेस स्वतन्त्रताबारे कस्तो धारणा बनाउलान् ? तिनीहरुले पत्रकारलाई गाली गर्नु अनौठो होइन । स्वाभाविकै हो, त्यस्ता भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरुले पत्रकारको विरोध...बाँकी